I-B&B ikwiGadi yeZityalo - I-Airbnb
I-B&B ikwiGadi yeZityalo
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguKees & Loes
Sinamagumbi ama-4 amakhulu, atofotofo aphindwe kabini. I-B&B imi kumda wegadi yethu yeehektare ezisi-8/ihlathi elishinyeneyo kwaye ingaphantsi kwe-1.5 km ukusuka elunxwemeni. Iingcungcu zityelela abaxhasi bethu yonke imihla.
I-B&B yethu isekupheleni kweprojekthi yokukhulisa amahlathi esayiqala ngo-2006. Ngoku sinehlathi elincinane leetropiki emva kwehotele elizele ziintaka ezimibalabala namabhabhathane. Ngethamsanqa uya kubona isilwanyana sasendle okanye i-armadillo sidlula. Iveranda yethu, efikeleleka kuzo zonke iindwendwe, inezixhasi zengcungcu ezitsala iingcungcu unyaka wonke.
IMariato yindawo entle enamalwandle amaninzi, amanye alungele ukuqubha kwaye amanye alungele ukusefa. Emva kweelwandle kukho amahlathi kunye neengxangxasi onokuzonwabela kuzo kunye nokwamkela iindwendwe zaseMariateños. Okokugqibela, ukususela ngo-Agasti ukuya kuDisemba, iifudo zaselwandle zizalela elunxwemeni kwaye unokunceda ukukhulula amantshontsho. Ukususela phakathi kukaJulayi ukuya kuSeptemba, iminenga ye-humpback ityelela ulwandle oluphambi kwethu. Kubabukeli beentaka kukho into emnandi: Ubuncinci zimbini iintlobo zeentaka ezifumaneka kwiPaki yeSizwe ekufuphi iCerro Hoya, kunye nezinye ezinomtsalane nezinqabileyo, njengemacaw enkulu eluhlaza.
Umbuki zindwendwe ngu- Kees & Loes
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Palmilla